यी हुन् सात प्रदेशका सम्भावित राजधानी, तपाइको कहाँ ? « Himal Post | Online News Revolution
यी हुन् सात प्रदेशका सम्भावित राजधानी, तपाइको कहाँ ?
प्रकाशित मिति : २०७४, १६ भाद्र ०६:०८
काठमाडौँ, १६ भदौ-
नेपाल सङ्घीय मुलुक भैसकेपछि धेरैको ध्यान अहिले राजधानी कहाँ बन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित छ । यत्रतत्र छलफल चल्छ त हाम्रो प्रदेशको राजधानी कहाँ बन्छ भन्ने बहस चल्छ ।
प्रदेश नं. १ का लागि इटहरीलाई सम्भावित सदरमुकामको रूपमा हेरिएको छ । प्रदेशको ठूलो सहरमध्येको एक इटहरी उपमहानगरपालिका भौतिक पूर्वाधारका कारण पनि सम्भावित राजधानी मानिएको छ । 7-pradesh
यस्तै, विराटनगरलाई पनि सम्भावित राजधानीका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले प्रदेशअनुसार गठन भएको उच्च अदालत पनि विराटनगरमै स्थापना गरेको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमा पनि विराटनगर अगाडि छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
२ नम्बर प्रदेशको राजधानीको रूपमा जनकपुर र वीरगन्ज देखिएका छन् । ऐतिहासिक सहर र उच्च अदालत पनि भएकाले जनकपुरको सम्भावना बढी छ ।
३ नम्बर प्रदेशका लागि सबैभन्दा धेरै सहर दाबेदार देखिएका छन् । हेटौँडा, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र बनेपालाई प्रदेश राजधानी बनाउन माग छ । सरकारले ललितपुरमा उच्च अदालत स्थापना गरेको छ । काठमाडौं केन्द्रीय राजधानी भएकाले ललितपुरलाई प्रदेश राजधानी बनाउने सम्भावना छ । केन्द्रमा र पूर्वाधारको रूपमा पनि ललितपुरको सम्भावना देखिएको हो ।
मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडामा रहेकाले हेटौँडा प्रदेश राजधानी बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । खुला जग्गा भएको र देशकै राजधानीको समेत विकल्पको रूपमा हेरिएकाले चितवनलाई पनि सम्भावित रूपमा हेरिएको छ । उपत्यका देशकै राजधानी भएकाले बनेपालाई प्रदेश राजधानीको रूपमा तोक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।
प्रदेश नं. ४ को राजधानीको रूपमा पोखरा निर्विकल्प देखिएको छ ।
यस्तै प्रदेश नं. ५ को राजधानीका लागि रूपन्देहीको बुटवल र दाङको तुल्सीपुरको सम्भावना बराबरीजस्तै छ । बुटवल र तुल्सीपुर दुवैलाई प्रदेश राजधानी बनाउन राजनीतिक रूपमा लबिङ भइराखेको छ ।
कर्णालीका जिल्ला समेटेर बनेको नं. ६ प्रदेशको राजधानीका लागि सुर्खेत र जुम्लाको दाबेदारी छ । कर्णालीको केन्द्र र कर्णाली अञ्चल सदरमुकामसमेत भएकाले जुम्ला प्रदेश राजधानी हुने सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेश नं. ७ को राजधानीको रूपमा धनगढी र दीपालयको उत्तिकै सम्भावना देखिएको छ ।